कमेडीको फुल डोज, जात्रै जात्रा ( समिक्षा ) – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature Newsकमेडीको फुल डोज, जात्रै जात्रा ( समिक्षा )
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- फिल्ममा दर्शकलाई हसाँउनका लागि जर्बजस्ती संवाद राख्न आवश्यक छैन । फिल्मका पात्रले मुख बङ्ग्याउन, अनुहार विगार्न पनि पर्दैन । पात्रले नबोल्दा पनि दर्शक हाँस्छन् ।
शुक्रबारबाट रिलिजमा आएको जात्रै जात्रा फिल्म यस्तै एउटा कथामा छ, जुन फिल्म हेर्दा दर्शकले यो कुराको महशुश गर्छन् । न त फिल्ममा कलाकारले अनुहार विगारेका छन्, न त लेखकले जर्बजस्ती संवाद राखेका छन् । जात्रा फिल्म जहाँबाट सकिएको छ, जात्रै जात्रा त्यहीबाट सुरु हुन्छ । जात्रै जात्राका पनि तिन पात्र छन्, विपिन कार्की, रविन्द्र झा र रविन्द्र सिंह बाँनिया ।
जेलमा ३ बर्ष बसेर अदालतबाट क्लिन चिट पाएर निस्किएका उनीहरुलाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोण फेरिदैन । पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या उस्तै छ । यत्तीकैमा ट्याक्सीमा फेला पारेको सुनलाई फणिन्द्रले कसरी पचाउने खेल खेल्छ । खेलको विचमा दयाहाङ राई, सुन तस्कर, प्रहरीको प्रवेश हुन्छ । फणिन्द्र र उनको टिमले सुनलाई पचाउँछ कि पचाउँदैन ? फिल्मले यही कथामा आफूलाई बगाएको छ ।
फिल्म जात्रै जात्रा कमेडीको पुरा डोज हो । फिल्म हेर्दा दर्शक पात्रको हाउभाउ, प्रवृत्तीसँग रमाउँछन् । पात्रको दैनिकीसँगै उनीहरु रुन्छन् पनि । फिल्मलाई निर्देशक प्रदिप भट्टराईले निकै राम्रोसँग बुनेका छन् । पहिलो जात्रामा राखिएको प्रश्नलाई समेत यसले जवाफ दिएको छ । यसैले जात्रै जात्रालाई प्रदिप भट्टराइको अर्को उत्कृष्ट फिल्म हो भन्न मिल्छ ।
फिल्मले साना-साना कुरा ध्यान दिएको छ । सुन काण्ड मौलाउँदा यसमा हुने सेटिङ, एउटा परिवारका लागि आर्थिक अभावले थिच्दा के के सम्म हुन्छ, बाबु र आमा अलग हुँदा छोराछोरीमा कस्तो खालको मनोभाव पर्छ ? यी सबै कुरा फिल्ममा उठाइएको छ ।
फिल्मको दोश्रो भाग केही लामो लाग्न सक्छ । तर, दर्शकले विपिन, रविन्द्रद्धयसँगै आफूलाई पनि बगाएका छन् । यसैले सिनेमा हेर्दा कतै पनि पट्यार लाग्दैन ।
फिल्ममा अभिनेत्री बर्षा राउतको भूमिका लामो छैन । तर, उनले जती गरेकी छिन् उत्कृष्ट गरेकी छिन् । विपिन कार्की फिल्मका मेरुदण्ड हुन् । विपिन कार्कीले आफूलाई यसअघिका फिल्ममा पनि अब्बल सावित गरिसकेका थिए । यसमा विपिन जमेका छन् । उनले नबोलेरै दर्शक हसाँउछन्, दर्शकलाई रुवाउँछन् ।
रविन्द्र झा र रविन्द्र सिंह बाँनियाको कमेडी लाइनअप पनि उत्कृष्ट छ । फिल्ममा कलाकारले आफ्नो कामलाई पुरापुर निर्वाहा गरेका छन् । दयाहाङ राई फिल्ममा यसपटक जोडिएका हुन् । तर, सुन तस्करको रुपमा उनले निर्वाहा गरेको भूमिकाले दर्शकलाई छुन्छ ।
जात्रै जात्रा कमेडी फिल्म हो । तर, यसले सिचुएसन अनुसारको कमेडीलाई भन्छ । दर्शकलाई हाँस्न वाध्य बनाउँदैन । दर्शक आफै हाँस्छन् । दर्शकलाई फिल्म हेर्दा हेर्दा आँखाबाट आशु आएको पत्तो हुदैन । जात्रा, शत्रु गतेपछि निर्देशक प्रदिप भट्टराइले फेरि आफूलाई प्रमाणित गरेका छन् ।
बाल कलाकार अव्रिन खड्काले दर्शकलाई भावूक बनाउँछन् । कलाकार, प्रस्तुती, क्लाइमेक्स, छायांकन, संवादका हिसाबले फिल्ममा उत्कृष्ट छ । जात्रै जात्राले जात्राको इज्जत धानेको मात्र छैन, यसको टिमले गर्व गर्ने ठाउँ समेत दिएको छ । तपाइले जात्रै जात्रा हेर्नुभयो भने राम्रो फिल्म हेर्नुहुनेछ । बाँकी निर्णय दर्शकको ।
rabindra singha baniya